Maalinta: Noofambar 24, 2018
Jaamacadda Canakkale Onsekiz Mart (COMU) Qeybta Injineerinka ee cilmiga cilmiga cilmiga ayaa howlgab noqotay. Dr. Doğan Perinçek wuxuu soo jiitay mashruuca uu magaalada ugu soo bandhigay warbaahinta bulshada. Magaciisa warbaahinta bulshada [More ...]
Xarunta Ganacsiga Turkoglu-ku waxay ku shaqeyn doontaa Kahramanmaraş Industry waxay sameyn doontaa Revolution
Xarunta loo yaqaan 'Türkoğlu Logistics Center', oo uu furay Ahmet Arslan, wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaarsiinta, ayaa la rajaynayaa inuu hawlgalo, sheekooyinka guulaha cusubna waa la qori doonaa haddii la hawlgeliyo. Kahramanmaraş oo ay la socoto dhimista qiimaha gaadiidka iyo helitaanka [More ...]
Xarumihii lagu xukumi lahaa ee aan xadhkaha goosanayn ayaa sii fududeynaysa nolosha muwaadiniinta naafa ah Halit Bakal, Maareeyaha Guud ee CK Energy Boğaziçi Elektrik, wuxuu shaaca ka qaaday tirada tirade gawaarida curyaanka ku shaqeeya ee ku shaqeeya baytariyada ku shaqeeya 13 [More ...]
Qorsho culus oo ka soo jeeda FSM Bridge si ay u noqdaan kuwa Beykoz
Furitaanka buundada 'YSS Bridge', ganaaxyada ilaa boqol kun TL ah ayaa loo jaray ganacsatada Beykoz, kuwaas oo leh gaari ganacsi oo fudud oo la mamnuucay inay ka gudbaan buundada FSM. Hafif Ma ogin is-dhaafsiga Iftiinka ka gudbaya Fatih Sultan Mehmet Bridge [More ...]
Guryaha Jidka Terminal-ka ee Altınordu
Degmada Ordu ee Magaalo-weynta Altinordu, dhismaha xarunta basaska isku xidha ee geeska ka ah shaqada dhismaha waddo-guurka ayaa weli ah mid aan kala go 'lahayn. Duqa magaalada Tekintaş wuxuu la kulmi doonaa baahida basaska ee Altınordu markii mashruucu dhamaado [More ...]
Khabiiro Dalxiis oo Dalxiis oo ku yaalla Dekedda
Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli waxay martigelisay Aleksandra Dejanovic, oo ah wakiilka shirkadda Belgrade Turkish Airlines ee Serbia iyo wakiillada wakaaladda dalxiiska. Duqa Magaalada Denizli ee Magaalo Weyn Cusmaan Zolan wuxuu carabka ku adkeeyay in Denizli uu leeyahay qiimaha dalxiiska guud. [More ...]
Maanta taariikhda: 24 November 1890 Concession X
Taariikhda Maanta 24 November Concord 1890 Khadarka Haifa-Der'a, oo la siiyay Ingiriiska, ayaa loo iibiyey dowladda Ottoman.